Devanagari Newsनिषेधाज्ञामा गीतकारः कोही गीत लेख्दै, कोही भन्छन्– ‘बेचैन मनले कसरी लेख्नु ?’ — Devanagari News
खोप माग्दै अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध
चिप्सको अभावले रोकियो सामसुङको नयाँ फोनको उत्पादन
सुदूरपश्चिममा ह्वीप उल्लंघन गर्ने ओली पक्षका सांसद निलम्बन नहुने
जन्मियो अनौठो बाच्छो : दुई मुख, दुई कान र चारवटा आँखा
बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्न असारमा प्रतिदिन १२ अर्ब खर्चनुपर्ने
निषेधाज्ञामा गीतकारः कोही गीत लेख्दै, कोही भन्छन्– ‘बेचैन मनले कसरी लेख्नु ?’
गीतकार एकनारायण भण्डारीलाई हिजोआज गीत लेख्ने जाँगर छैन । उनले निषेधाज्ञा लागू भएसँगै आजसम्मको समय यत्तिकै व्यतित गरे । ‘कोरोनाका कारण माहोल नै राम्रो छैन्’ उनी भन्छन् ‘लेख्नतर्फ जाँगर नै चलेको छैन । एकदमै अल्छी भएको छु ।’
गतवर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनमा भने एकनारायणले केही गीतहरु लेखेका थिए । गीतहरु स्रोता–दर्शकले रुचाएका पनि थिए । चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ४’का लागि दुई गीत गतवर्षको लकडाउनमा तयार पारेका थिए । तर, कोरोनाका कारण चलचित्र रिलिज हुन पाएन ।
यसवर्ष पनि केही राम्रा सिर्जनाहरु दिने एकनारायणको सोँच छ । तर, आफ्नो मनलाई लेखनतर्फ लैजान सकिरहेका छैनन् । ‘लेखनतिर मन लैजान खोजेपनि सकिरहेको छैन्’ उनले भने ‘निषेधाज्ञा थपियो अब मानसिक रुपमा तयार भएर लेख्न थाल्नुपर्ला ।’
उनी अब गरिरहेका भन्दा फरक सिर्जनातर्फ लाग्ने सोँच बनाएको बताउँछन् । ‘आफूले गरिरहेको भन्दा केही फरक, आफ्नैपनभित्र पनि प्रयोगात्मक शैलीका गीतहरु, शब्दमा गहिरो साहित्यको खोजिमा छु । हेरौं कस्तो हुन्छ’– उनले सुनाए ।
गीतकार राजकुमार बगर कोरोना महामारीका कारण गीत लेख्ने मुड नै नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुःखको गीत लेख्न पनि मनमा चैन हुनुपर्ने रहेछ । अहिले मन नै बेचैन छ । यस्तो अवस्थामा कसरी गीत लेख्नु ?’
गीत लेख्न बसेपनि मन कोरोना महामारीले निम्त्याएको भयावह अवस्थातर्फ जाने बताउँछन् ।
यद्यपी, निषेधाज्ञाले फुर्सदिलो बनाएको हुँनाले आगामी दिनमा गीतसंगीतमै केही सिर्जनात्मक काम गर्ने उनको सोँच छ । ‘निषेधाज्ञा भएपछि अहिलेसम्मको समय त यत्तिकै बिताए । अब चाँही लेख्नुपर्ला भनेर सोँचिरहेको छु’– उनले भने ।
गीतकार डा. कृष्णहरी बरालको निषेधाज्ञाको दैनिकी भने लेखनतिरै छ । ‘खाना खाएपछि दिनभर लाइब्रेरी कोठामा बसेर लेखनमा समय बिताईरहेको छु’ उनले भने ।
उनले गीतसंगै किताब लेखनमा अहिलेको समय बिताईरहेको बताउँछन् । निषेधाज्ञा लागू भएपछि आधा दर्जन गीत लेखिसकेको उनी बताउँछन् ।
अन्य समय प्रायः ब्यस्त दैनिकीमा हुने बराललाई अहिले धेरैले गीत लेख्न आग्रह गर्ने गरेका छन् । ‘अहिले फुर्सदमा हुने कारणले धेरैले गीत लेखेर पठाइदिन आग्रह गर्छन । फर्माइस अनुसार गीत लेख्ने, सम्बन्धित ब्यक्तिलाई पठाउने काम चलिरहेको छ’ उनी भन्छन ।
त्यस्तै आफ्नो किताब ‘गीत सिद्धान्त र ईतिहास’, ‘गजल सिद्धान्त र परम्परा’ परिमार्जनतर्फ लागिरहेको उनी बताउँछन् ।
गीतकार नेत्र अर्याले निजामति सेवामा कार्यरत छन् । उनी आलोपालो कार्यालय जानुपर्छ । कार्यालय नभएको समय भने लेखनमै बित्ने गरेको छ ।
गतवर्षको लकडाउनमा उनले डेढ दर्जन जति गीत लेखेका थिए । ‘लरिलरीलै’, ‘सोँचेझै जिन्दगी रैनछ’, ‘झ्यालमा पर्दा छ’ लगायतका गीतलाई स्रोता दर्शकले रुचाएका थिए ।
यसवर्ष निषेधाज्ञा भएपछि केही गीतहरु तयार पारेका छन् । ‘पहिले कुरा भएका केही गीतहरु अहिले लेखिरहेको छु । त्यसबाहेक तीज गीतको पनि लेखनमा लागेको छु’ उनले सुनाए ।
यद्यपी कोरोना महामारीका कारण लेखनतर्फ अन्य समयमा जस्तो ध्यान नजाने बताउँछन् उनी । ‘आफू ब्यस्त भएपनि माहोल राम्रो हुँदा सहज तरिकाले लेखिने रहेछ । फुर्सद हुँदा पनि बाहिरको परिस्थितिले गर्दा ध्यान दिएर लेख्न नसकिने रहेछ’ उनले अनुभव सुनाए ।
जुलाई २७ बाट अक्षयको ‘बेल बटम’ हलमा रिलिज हुने
पुराना छायांकार प्रधानको निधन
‘बेल बटम’को पारिश्रमिकमा ३० करोड घटाउन अक्षय तयार
आर्यन–नम्रताको जोडीको प्रतिक्षा
संझनामा सुशान्तः करिअर चम्कदै गर्दा किन रोजे आत्महत्याको बाटो ?
अभिनयमा रमाउने प्रकृतीको कर्मा र मेनुका मनपर्ने नायक–नायिका